Monday January 09, 2017 - 07:51:09 in Wararka by
Nidaamka shiiciga Iiraan ayaa waayay mid kamida tiirarka ugu waaweyn ee uu ku taagnaa xilli nidaamkaasi siraac adag uu uga jiro mandiqadda ay reergalbeedku u bixiyeen Bariga dhexe halkaasi oo iiraan ay u dirtay kumanaan katirsan ciidankeeda si ay uqa
War rasmi ah oo kasoo baxay xukuumadda Dahraan ayaa lagu sheegay in uu halaagsamay Cali Akbar haashimi oo iiraan soo maamulay muddo 8 sanadood ah dhammaadkii sideetameeyadii illaa dhammaadkii sagaashameeyadii.
Sida ay baahisay wakaaladda Faaris ee ku hadasha afka maamulka shiiciga ah ee ka dhisan dalka Iiraan, waxaa geeriyooday madaxweynihii hore dalka Iiraan ninka lagu magacaabo Cali Akbar Haashimi RafsinJaani.
Wakaaladda ayaa sheegtay in Rafisjaani ay lasoo darseen xanuuno dhanka wadna ah, islamarkaana gelinkii dambe ee shalay loola cararay xarumaha Caafimaadka si loo dabiibo balse uu geeriyooday.
Cali Akbar Haashimi Rafisjaani oo 82 jir ah ayaa jagooyin kala duwan waxa uu kasoo qabtay dowladda Iiraan, intii u dhexeysay sanadihii 1989 iyo 1997 ayuu soo ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda shiiciga ah ee Iiraan, wuxuuna sidoo kale soo qabtay jagooyin ay kamid yihiin Taliyaha ciidamada Iiraan, gudoomiyaha Baarlamaanka iyo jagooyin intaas kabadan, waxaana lagu tiriyaa inuu kamid ahaa dadka ka ag dhow Khumeyniga Iiraan.
Wariye ku sugan magaalada caasimada ah ee tahran ayaa soo sheegay in arrin lama filaan ah dadka shiicada ah ku aheyd geerida rasfanjaani oo ay u arkaan hoggaamiye ruuxi ah, sanadadii lasoo dhaafayna wuxuu madax u ahaa kooxo isbedel doon ah oo ku xayndaaban xasan ruuxaani.
Sidoo kale rasfanjaani wuxuu haayay muhiimadda dagaalkii sideeda sanadood qaatay ee lala galay ciraaq sanadii 1980-1988 wuxuuna ahaa ninkii ishraafayay waxaa lagu tirinayay hoggaamiyay u oomanaa daadinta dhiigga muslimiinta sunniga ah, rasfanjaani isaga ayaa bilaabay dagaalka ciraaq xilligaas oo uu ahaa taliya ku xigeenka ciidanka kacaanka iiraan sidoo kale wuxuu ahaa ninkii ku dadaalayay in dagaalka ciraaq lajoojiyay.